Sargaal loo haystay dilka Madaxweyne Sheikh Mujibur Rahman oo la dal dalay | Dhexnimo Media
Home Wararka Sargaal loo haystay dilka Madaxweyne Sheikh Mujibur Rahman oo la dal dalay
Sargaal loo haystay dilka Madaxweyne Sheikh Mujibur Rahman oo la dal dalay
Dowlada Bangaladesh ayaa xukun dal dalaad ah ku fulisay sargaal katirsanaa milatariga dalkaasi oo loo heestay in uu ku lug lahaa dil 45-sano kahor loo geestay Madaxweynihii ugu horeeyay dalka Bangaladesh.
Sargaalkan oo lagu magacaabo Cabdul Majiid ayaa lagu dal dalay magaalada Dhaka ee caasimada dalka Bangaladesh, kadib markii lasoo diiday codsi ku aadan in dib loo eego xukunka dilka ah ee lagu riday.
Sida ay ku warantay Warbaahinta Bangaladesh sargaalkan ayaa baxsad ku jiray in ka badan 25-sano , waxaana ugu dambeyn lagu fuliyay xukun dal dalaad ah kadib markii gacanta lagu dhigay.
Madaxweynihii ugu horeeyay ee dalka Bangaladesh Sheikh Mujibur Rahman ayaa la dilay sanadkii 1975-tii xili afgembi milatari uu dalkaasi ka dhacay, waxaana Madaxweynaha lala dilay xubno qoyskiisa kamid ahaa.
Sheikh Mujibur Rahman Madaxweynihii ugu horeeyay ee Bangaladesh ayaa ah aabaha dhalay Ra’isul Wasaaraha Bangaladesh Sheikh Hasina , waxa ayna gabadhan ku dadaashay sidii cadaalada u marsiin laheyd dadkii dilay aabaheed iyo xubno qoyskiida kamid ahaa.
Previous articleTalyaaniga oo lagala wareegay tirada dadka ugu badan ee u dhintay Caronavirus
Next articleDalka Yemen oo qofkii ugu horeeyay laga helay cudurka Coronavirus